Lo mbuzo uvame imele phambi abanikazi iziza ezincane. Phela, endaweni encane futhi ungathanda ukubeka izakhiwo, kanye nensimu , izihlahla zezithelo, kanye zezimbali, namabhati, futhi mhlawumbe echibini nge-slide alpine.
Lapho senza sokuxazulula endaweni suburban ngezandla zakho, kuzomele acabangele amaphutha ejwayelekile ukuthi mfunda-makhwelo balimi.
Hhayi ukwakha igalaji noma indlu ngakolunye uhlangothi lisuke emnyango noma phakathi kwesiqinti. Kulokhu, umgwaqo kuzothatha isikhala esiningi up. Akubalulekile ukwakha endaweni encane izakhiwo zihlakazeke - qondanisa hozblok endlini futhi igalaji.
Uma ucabanga ngombuzo, indlela ukuhlomisa endaweni suburban ke ulalele umbono abaklami obhekana nazo. Kuyadingeka ukuba makudle lemisuka ngaphandle okuyinto akunakwenzeka ukwenza. Kuzoba Kube yinhlanhla nje uma nethuba ukuhlela yokupaka izimoto ngaphandle endaweni yabo. Ngakho uzokwazi ukunweba indawo yokuzilibazisa.
A ezihlukahlukene imibono sendlela ukuhlomisa indawo ezweni, kukhona ezihlukahlukene kakhulu. Uma cottage wakho akuyona likhulu kakhulu, bese ungazami ukutshala zonke izihlahla esakaza nezihlahla. Kwanele ukuba umuthi owodwa omkhulu, kodwa umqhele yokuqala futhi amahlamvu amahle. Umqhele ngezikhathi ezithile ukuba sehliselwe (ukukhiqiza izihlahla njalo). It is ibekezelelwe kahle Linden ne-maple izihlahla.
Kubantu abaningi, umbuzo ophakamayo, indlela ukuhlomisa endaweni suburban kuyilapho kulondolozwa izihlahla zezithelo? Phela, ukupha akunakwenzeka ukuba sicabange ngaphandle izithelo fresh. Namuhla kungenzeka ukusebenzisa izinhlobo lulwimi yemifino zemithi yezithelo. Beka konke okusemandleni abo ngendlela uvalo, indawo ukuba benze kanjalo umbhede imbali noma utshani.
Uma sicabanga, Indlela ukuhlomisa endaweni suburban, akufanele sikhohlwe mayelana palette umbala izakhiwo, nezikhala. kukhethwe kahle futhi esetshenziswa umbala kungaba zibukeke bandise isikhala. Abanolwazi landscape abaklami bayaqiniseka ukuthi uma ubeka i-isitshalo yokuqala ezinemibala egqamile ongaphambili, engadini ozuza ivolumu nokujula. Ngemuva kuthiwa izitshalo ezifanelekile imibala abandayo kanye amnyama (ikakhulukazi coniferous). Kunenye design indlela owaziwa enqophe umphumela ofanayo. Osemuva ukuba itshalwe izitshalo namahlamvu ezinkulu, futhi ngemuva - nge emihle.
Yangaphandle Ingadi incike kocingo. Uthango kumelwe kuvumelane umklamo endlini. obala kwakho kuncike indawo lapho villa itholakala. Uma kuwukuthi ngesikhathi umgwaqo omatasa, kungcono ukwenza kocingo materials okuqinile (amatshe, ukhonkolo, isitini). Uthango lungakhiwa sobala uma endaweni suburban etholakala endaweni eyihlane. Kulokhu, kocingo ezinkulu Ungashintshanisa uthango.
Indlela ukuhlomisa endaweni suburban (isithombe ungabona kulesi sihloko), ukuze uthumele ukushisa kwehlobo kulula? Ngokungangabazeki, lokhu kuzokusiza echibini noma pool Uhlaka encane.
Work at zabo cottage ehlobo kubaluleke kakhulu, futhi abahambisele kumnandi ngempela eziningi, kodwa ungakhohlwa ukuthi ziqale futhi kuba indawo yokugoba amadlangala, ngakho-ke kufanele kube ukhululekile futhi emuhle.
Ukubeka zobumba amathayili
Spacers naslonnye semishayweni: incazelo, izifunda, kanye idivayisi izici ukubala
Imidlalo transformer Megatron: incazelo, iseluleko, amathiphu
Margaret Mitchell: Biography, izingcaphuno, izithombe, izingcezu
Nominative: ukwehluka eziyimpumelelo